မောငျ(စှယျစုံကမျြး): Facebook System အားလုံးကို Myanmar Lunguage ပြောင်းနည်း လေးဖြစ်ပါတယ်.
Facebook System အားလုံးကို Myanmar Lunguage ပြောင်းနည်း လေးဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနေ့ Facebook System အားလုံးကို Myanmar Lunguage ပြောင်းနည်းလေးရေးတင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို ရေးတင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ မသိသေးသူတွေအတွက် ပညာတခု တိုးပွားစေချင် တာပါ။ မြန်မာစာနဲ့ ဆိုတော့ Facebook Setting တခုလုံးကို လိုသလို စိတ်ကြိုက် နားလည် စွာ မွှေနှောက် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာက Zawgyi.one နဲ့ Myanmar3 ဖောင့်က မတည့်ပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် မြန်မာတွေ zawgyi.one နဲ့ ရေးတဲ့စာကို အမှန်မမြင်ရပြန်ဘူး။ Facebook Setting လောက်ကိုပဲ မိမိစိတ်တိုင်းကျ နားလည်အောင် ၀င်မွှေ နှောက်ပြီးရင် Lunguage English ပြန်ပြောင်းပေါ့။ ဒီလင့်ထဲ ၀င်ပြီး ပြန်ပြောင်း လိုက်လို့ ရပါ တယ်။ မော်ဇီလာ ဖောင့်ကိုလည်း Zawgyi.one ပြန်ပြောင်းပေါ့။
Author Zaw Min Than at 8:43:00 PM
language မှာ မြန်မာဘာသာ မတွေ့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရလမလဲ
Language တွင် မြန်မာဘာသာမပါရှိသူများ အနေဖြင့် https://www.facebook.com/translations သို သွားရောက်၍ ညာဘက်အောက်ခြေတွင် ရာခိုင်နှုန်းပြထားသော translation ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး turn on translation ကို နှိပ်၍ မြန်မာဘာသာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာ Unicode standard ရှိသည့် မြန်မာ font များရှိလျှင် မိမိ၏ Facebook ကို မြန်မာစာများဖြင့် မြင်တွေ့နိူင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
sony phone မရဘူးကိုနည်းလေးပြောပြပေးပါနော်
မရဘူးအကိုကြီး ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Internet Explorer (64-bit) နဲ့ ပါ ပြောင်းလို့ မပေါ်ဘူးမြန်မာ